I-Lithium ion Battery Pack
Ibhethri elenziwe ngokwezifiso
Ibhethri Ithuluzi Lamandla
Ibhethri leCylindrical Type
Isevisi yebhethri ye-OEM ne-ODM yamukelekile
Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ithimba lobunjiniyela likhethe amaseli, aklama i-BMS, apakisha amaseli, enza izivivinyo. Suthisa amaklayenti ethu ngezixazululo zokhiye. Iphakethe lebhethri elenziwe ngokwezifiso ne-LG / Samsung / Sanyo / Panasonic / Sony cell nebhethri.100% Isiqinisekiso Esiqinisekisiwe. Sicela uxhumane nathi ngesilinganiso samahhala ngamaphrojekthi wakho wepakethe yebhethri.
Ukusekelwa kwe-R & D
Njengomkhiqizi okhokhelwayo kukhona onjiniyela ababalelwa ku-30 ​​eqenjini le-PLM R & D okubandakanya ama-5 PHD, ama-10 MFD nama-Bachelors ayi-15. Cishe imishini engama-30 yemishini yokukhiqiza ezenzakalelayo, imishini engu-25 ye-nubit Semi-automatic kanye ne-8 imigqa yokukhiqiza efektri yethu.
Ukulethwa ngesikhathi: E-PLM siyaqonda ukuthi enye yezimfuno ezibaluleke kakhulu zamakhasimende ethu ukugcina isikhathi. Siyikhathalela inqubekela phambili yethu yokulethwa njengekhwalithi yethu. Izinga eliphakeme kakhulu: Imikhiqizo yokuqinisekisa esezingeni eliphakeme iyona nto ebaluleke kakhulu kithi. Lesi isizathu esenza ukuthi njalo sikhethe ukutshala imali kwizisombululo zobuchwepheshe obukhulu esikhungweni sethu se-R&D. Imikhiqizo ekhethekile: Kubandakanya ibhange lamandla elincanyana emhlabeni, i-PLM inikezela ngemikhiqizo ehlukahlukene kakhulu ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende nezimfuno zawo. Ukuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu: Ukukhathazeka okukodwa okuvela njalo lapho amaklayenti ethu abelana nathi yisidingo sokwethenjelwa kwensizakalo yamakhasimende futhi sinakekela noma yimiphi imibuzo ngaphambi nangemva kokuthengisa.
Ukuphathelene kwethu ShockSpreadTM
IShenzhen Polymer Battery CO., LTD yasungulwa ngonyaka ka-2014, ingumkhiqizi webhethri we-lithium ion okhokhelwayo onomlando ongaphezulu kweminyaka engu-5 eChina. Imikhiqizo ephambili ibhethri elingahleleleki kabusha elinokuphinda lisebenze, ibhethri le-18650 ibhethri, ibhethri le-e-bike, amaphakethe ebhethri le-lithium noma amanye amaphrojekthi webhethri enziwe ngezifiso. Singanikeza ikhambi lesinyathelo esisodwa nemikhiqizo yochungechunge lonke kusuka kumabhethri kuya ezinhlwini zamabhethri njengezidingo zamakhasimende.
103450 1800mAh-Smart imaski
Imininingwane Yomkhiqizo: Ukusetshenziswa: Amathoyizi, Umenzi Wezindlu ...
Ikhwalithi ephezulu eyenziwe ngokwezifiso 18650-4s 14.8v 3400mAh ...
Imininingwane Yomkhiqizo: Model: PLM18650-4S1P Nominal ...
Intengo yefektri i-UL ivume ukuhlaziywa kwe-22.2v 900mah ...
Imininingwane Yomkhiqizo: Isibonelo: Ibhethri le-PLM-NH2057QE34 ...
I-CPAP ibhetri ehlakaniphile enamandla okwakhiwa kwamandla ...
Ukuthengiswa okushisayo 36V 9AH / 10Ah / 13.6Ah / 17Ah 20Ah lithium ...
Imininingwane Yomkhiqizo: Imodeli: PLM-36v20ah Ibhethri Pa ...
Ibhethri ifektri ngqo yokuthengisa 5000mah 3.7v li -...
Imininingwane Yomkhiqizo: Ukwethulwa Komkhiqizo kwe-PL ...
Selokhu lasungulwa, ifektri yethu ibilokhu yathuthukisa imikhiqizo yezinga lokuqala ngokulandela umgomo wekhwalithi kuqala. Imikhiqizo yethu ithole idumela elihle embonini kanye nokubaluleka okuhle phakathi kwamakhasimende amasha namadala ...
I-COVID-19 ibangela ukubuthakathaka kwebhethri okubuthakathaka, iSams ...
IBattery.com ifunde ukuthi iSamsung SDI, b ...
INorthvolt, indawo yokuqala yaseYurophu ...
Ngokwemibiko yabezindaba yaphesheya, i-E ...
Ukwanda kwamanani e-cobalt kudlule ...
Kwikota yesibili ka-2020, inani eliphelele ...
Ucingo: + 86-755 36631197
Isitezi 5, Isakhiwo 6, iDongfanghong Industrial Park, Yushi Road, guanlan, Long Hua, 518109 Shenzhen China